धमाधम चम्किदै छन् काठमाडौंका सडक ! – Khabarhouse
धमाधम चम्किदै छन् काठमाडौंका सडक !
Khabar house | २० चैत्र २०७६, बिहीबार ०२:४६ | Comments
काठमाडौं : को;रोना भाइरसको महामारीले देशै ठप्प भइरहँदा राजधानीका सडकहरु भने चिल्ला देखिन थालेका छन्। लकडाउनले सडकमा सवारीसाधन नचलेको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं सडक डिभिजनले सडक रेखांकन गरिरहेको छ। यसले भर्खरै पिच सकिएका सडक चम्किलो देखिन थालेका छन्।
गत फागुन २७ गते मंगलबार राति १० बजे काठमाडौं सडक डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीलाई बालुवाटार क्षेत्रमा भेटेका थियौँ। उनी बालुवाटार क्षेत्रको सडको ओभरलेको काम निरीक्षण गरिरहेका थिए। ‘चैत मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकाका सबै सडक कालोपत्रे भइसक्छन्’, उनले त्यतिबेला हामीसँग भनेका थिए, ‘५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो।’
सडक विभागको काठमाडौं डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत ४१ किलोमिटर सडक पर्छ। डिभिजन प्रमुख रहेका उनी दिउँसो कार्यालय जान्थे भने रातको समयमा आफ्नो मातहतमा काम भइरहेको ठाउँमा पुग्थे । कुनै दिन एउटा समूह परिचालन भएको हुन्थ्यो भने कुनै दिन दुई/तीन समूहले उपत्यकामा कालोपत्रेको काम गरिरहेका हुन्थे।
काठमाडौंका मुख्य सडकले मुहार फेर्दै थिए। मौसमको साथ उस्तै थियो। जाडोको मौसम वा वर्षा हुने समयमा काम गर्न मिल्दैन। माघ अन्तिमबाट काठमाडौंका सडक कालोपत्रको काम सुरु भएको थियो । आज चैत १९ गते भयो । अहिले देश को;रोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउनको अवस्थामा छ। अत्यावश्यक कामबाहेक सबै जनता आ–आफ्नो घरमा बसिरहेका छन्। अहिले सडक कालोपत्रे गर्ने अवस्था छैन।
उनी मातहतका ४१ किमिमध्ये करिब ३१ किमि सडक लकडाउन हुनु भन्दा अघिसम्म कालोपत्रे भइसकेको थियो। चैतभित्र सक्ने गरी तीव्रगतिका साथ काम गरे पनि परिस्थितिले कालोपत्रे गर्न दिएन । तर उनी आज पनि त्यत्तिकै बसेका भने छैनन्। कालोपत्र भएको केही सडकमा रेखाङ्कनको (रोड मार्किङ) काम बाँकी थियो।
लक डाउनको अवस्थाको कारण धेरै श्रमिक एकैठाउँ जम्मा हुँदा को;रोना संक्रमण फैलिने डर पनि थियो । त्यसैले धेरै समूह बनाएर काम गर्न चाहेनन्। सानो टिम बनाएर रोड मार्किङको काम भने गरिरहेका छन् । जसले काठमाडौंका धेरै मुख्य सडक चिल्ला र आकर्षक बनिरहेका छन्।